प्रचण्डलाई किन बढ्यो खतरा ? उनको सुरक्षामा बढाइयो सुरक्षाकर्मी – Ramailo Sandesh
प्रचण्डलाई किन बढ्यो खतरा ? उनको सुरक्षामा बढाइयो सुरक्षाकर्मी
काठमाडौं । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गृह मन्त्रालयले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत केही विशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षामा विशेष चासो राखेको छ । ओली सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै भीआइपीको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी घटाएको थियो ।
तर देउवा सरकार आएपछि प्रचण्ड, नेपाल लगायत नेपाल पक्षका सांसदहरुको समेत सुरक्षा बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग नेपाल र प्रचण्ड लगायत केही नेताहरुसंगको सम्बन्ध चिसिएपछि सरकारले कार्यविधि जारी गर्दै उनीहरुलाई सरकारले दिँदै आएको सुरक्षा हु्वात्तै हटाएको थियो । आफुलाई सरकारले दिँदै आएको सुरक्षा घटाएपछि प्रचण्डलाई उनकै पार्टीले पूर्व ल डा कु परिचालन गरेर सुरक्षा दिएको थियो ।
देउवा सरकारमा गएपछि पुनः अध्यक्ष दाहाललाई डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पहिले दिँदै आएको भन्दा थप सुरक्षाकर्मी समेत पठाइएको छ। अहिले डीएसपी विनोद घिमिरेले प्रचण्डको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका छन्।
एमाले भित्र देखिएको विवादका बीच नेपाल र उनका पक्षधर नेताहरुलाई पनि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै प्रहरीले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर उनीहरुलाई सुरक्षा दिएको छ । प्रचण्डलाई देउवाले किन सुरक्षा बढाए भन्ने कुराको उत्तर भने अनुत्तरीत नै छ । एमाले नेता नेपाललाई एमालेकै युथफोर्सका नेता कार्यकर्तावाट खतरा रहेको अनुमान लगाउँदै सुरक्षा बढाइएको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि युथ फोर्सले आन्दोलनको घोषणा गरेका कारण न्यायाधीस र प्रधानन्यायाधीसहरुको पनि सुरक्षा बढाइएको छ । तर प्रचण्डलाई के खतरा हो ? भन्ने कुरा खुलेको छैन । देउवाले प्रचण्डलाई रिसाउनकै लागि उनको सुरक्षा पनि बढाएका त होइनन् ? सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अध्यक्ष दाहाललाई पठाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीका १६ जना र २ जना नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा दिन मापदण्डमा उल्लखे छ। त्यस्तै, पूर्व राजाको हकमा पनि यही सङ्ख्या लागू गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई भने सेना समेतले सुरक्षा दिने मापदण्ड छ।
आज अत्यन्तै पवित्र हरिसयनी एकादशी, तुलसिको फोटो छोइ ॐ लेखेर यसरी ब्रत बस्नुहोस लाभै लाभ मिल्नेछ…